Genymotion: Ihe emulator Android maka GNU / Linux | Site na Linux
Genymotion: Ihe emulator Android maka GNU / Linux
Linux Post Wụnye | | android, GNU / Linux, Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ
Ekele, Ezigbo ndị na-agụ cyber, nke ugbu a anyị ga-akpọbata gị Mgbagha ihe omume magburu onwe ya nke m malitere iji mafere usoro teknụzụ nke Akụrụngwa na ngwanrọ na Smartphone m.
Mgbatị: bụ a kpọmkwem cross-ikpo okwu emulator na-akwado android, nke na-aga nke ọma na ngwa ngwa dị iche iche ekwentị mkpanaaka (Ekwentị na mbadamba) dabere na sistemụ nrụọrụ a. Maka ndị nọ na MS Windows ha na-eji Bluestack, Mmekọahụ ọ bụ ihe kasị mma oke maka emulator android ma na-agba ụdị dị iche iche ngwa na egwuregwu na otutu sistemụ arụmọrụ anyị (Windows, Mac ma ọ bụ GNU / Linux).
Mgbagha Ọ bụ ezigbo iche na-abụghị iji na-anwale egwuregwu na ngwa, ka kwado mmepe ngwa gam akporo. More nke Ndị ọrụ ndebanye ndebanye aha nde 4.500.000, ọtụtụ kesara n'etiti ihe karịrị 10.000 nnukwu ụlọ ọrụ gosipụta nkwụsi ike ya na ịdị adị. Nke a emulator na-eme ka ojiji nke VirtualBox (Ngwaọrụ Virtual) na-agba ọsọ ahụ Gburugburu (Virtual ekwentị na mbadamba) na n'aka na-akwado ndị dị iche iche ochie na nke ugbu a na nsụgharị, mụ ma ọ bụ ule, ebe ị pụrụ nwalee gị ọdịnihu ngwa ọdịnala n'ihi gam akporo na ezigbo mobile ngwaọrụ.
Ikekwe ọtụtụ ndị maara nke yiri oru ngo, ma Team na-elekọta Mgbagha jisiri ike chee interface dị mfe nke nwere ike ịkwado Akụrụngwa dị iche iche na nsụgharị dị iche iche nke gam akporo maka ụdị onye ọrụ ọ bụla, na-enweghị echefu ndị mmepe bụ ndị bụ isi ahịa ya na ahịa azụmaahịa.
Nke ahụ bụ, ha emezuola na ole na ole dị mfe clicks ikwe ka onye ọrụ mepụta Dịka ọmụmaatụ, igwe arụmọrụ nke na-eulatesomi ngwaọrụ dabere na ụdị ngwaahịa sitere na Google, HTC, Motorola, Samsung, Sony, n'etiti ndị ọzọ, na n'ihi na dị iche iche ntọala Android 2.X, 3.X, 4.X, 5.X na 6.X, na-agbakwunye iche iche mkpebi ihuenyo. Na nke kachasị mma bụ nke ahụ oge na-aga ọnụ ọgụgụ nke ngwaọrụ na nsụgharị nke gam akporo dị na-aba ụba ka teknụzụ na-aga n'ihu.
Genymotion Virtual Machines ugbu a nye niile atụmatụ ndị dị mkpa chọrọ na a Ngwaọrụ ekwentị, dị ka iji njikọ ịntanetị anyị, nkedo nke ọnọdụ anyị site na GPS, nkedo igwefoto, ọnọdụ batrị, ntụgharị ngwaọrụ, na ntinye nke Google Play Store ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ọrụ gọọmentị ọ bụla ma ọ bụ nke na-akwadoghị ọrụ ị họọrọ. Ebe ọ bụ na o doro anya na ọ bụ n'ihi nsogbu ikikere, Mgbagha anaghị etinye ihe ọ bụla site na Google site na ndabara, ọ bụ ezie na n’ezie n’oge ọ bụla, enwere ike idozi nke a. N’agbanyeghi na nsogbu adighi, ebe obu Mgbagha -enye gị ohere iji wụnye ọ bụla apk o zip adọkpụpụta faịlụ n'elu emulator. Ya mere, anyị nwere ike ilele ọtụtụ peeji ndị dị na ọdịnaya na-akwadoghị gam akporo ma họrọ ngwa na usoro apk o zipdị ka roztwiki ma wụnye ihe ọ bụla dakọtara na ngwaọrụ anyị eulatedomi.
Companylọ ọrụ na-akwado Mgbagha ha na-enye adịchaghị na akaụntụ gụnyere mmetụ njikwa site na ngwaọrụ ọzọ, ma ọ bụ Pixel zuru oke iji mezuo imewe nke ụfọdụ ngwa ọdịnala dịka a ga-egosipụta ya na ngwaọrụ X, ma ọ bụ inwe ike idekọ ihuenyo (vidiyo) site na interface.
Na nkenke, Mgbagha dị ugbu a onye nke kasị mma cross-ikpo okwu free gam akporo emulators. Ọ bụghị naanị na ọ na-agbanwe, dị ike, dị mfe iji mana ọ dị mma maka ndị mmepe gam akporo na ndị ọrụ nkịtị. Ọ na-enye anyị ohere iji ulatingomie nchịkọta dị mkpa nke ngwaọrụ gam akporo dị iche iche, nke ị nwere ike ịgbakwunye iji PC PC na òké, ịnweta Internetntanetị na ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ na-akpaghị aka, dị ka geolocation na ịba ụba / na-ebelata oke nke windo ahụ. Site na ntọala ntọala ADB (Bridge Debug Android), otu nhọrọ echebere maka ndị ọrụ dị elu. Ọ bụla ọrụ nwere ike iji Mgbagha ọ dịghị mkpa ịhazi ihe ọ bụla.
Genymotion na-arụ ọrụ dị ka amara, Na arụmọrụ arụmọrụ, na 1 GB nke RAM na 1 e kenyere CPU nwere ike ịgba ọsọ ngwaọrụ dị mfe na 2.X nke gam akporo yana yana 4 GB na 2 CPUs ruo ngwaọrụ kachasị mma dị na ahịa na ụdị gam akporo ọhụrụ dị (6.X ). Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile na-arụ ọrụ zuru oke ma ọ nwere obere ihe dịka Dị mgbagwoju anya eserese egwuregwu nke anaghị enwe ike igwu egwu.
Etu esi etinye ma jiri Genymotion
Ka e were ya na anyị etinyeworị Virtualbox na nke anyị GNU / Linux Sistemụ nrụọrụ, ọkacha mma na ya kacha ọhụrụ version na ya ndọtị mkpọ arụnyere, anyị gaba ibudata ya na gị ukara website (Genymotion), idebanye aha na ịpị bọtịnụ ahụ «Họrọ atụmatụ», na windo na-esonụ na ngalaba "Otu onye" Na mpaghara "Isi" pịa bọtịnụ «Bido ».
Na ọzọ window akpọ «Budata Genymotion» họrọ ngwungwu ngwugwu maka Ubuntu 14.04 / DEBIAN 8 (32 ma ọ bụ 64 Bit), ma ọ bụ Ubuntu 15.04. Ozugbo ebudatara, wụnye Genymotion na ndekọ nke ịhọrọ. N'iji iwu dị n'okpuru ebe a, ọ bụrụ na ibudatara ụdị 64 bit Ubuntu 14.04 / DEBIAN 8:
Ọ ga - ajụ gị ihe ndị a:
Wụnye maka ndị ọrụ niile.
Ingwụnye na folda [/ opt / genymobile / genymotion]. O doro gị anya [y / n]?
Pịa igodo jiri nkwenye "na" na igodo «Tinye»
Ọ bụrụ na ihe niile na-aga nke ọma, ọ ga-atụba ozi ndị a:
- inggbalị chọta VirtualBox toolset …… .. OK (Valid mbipute nke VirtualBox hụrụ: 5.0.16r105871)
- Adọkpụpụta faịlụ OK .. OK (Na - adọkye n'ime: [/ opt / genymobile / genymotion])
- Na ịwụnye launcher icon ………………… OK
Echichi mere nke ọma.
Nwere ike iji ngwa ọrụ ndị a si [/ opt / genymobile / genymotion]:
Nwere ike ugbu a na-agba ọsọ ahụ Genymotion ngwa si Ngwa menu, ngalaba mmemme.
Mgbe emechara ma mepụta MV mbụ gị na Ngwaọrụ na gam akporo ahọpụtara, ana m akwado gị ka ị chọọ ma budata nchịkọta ndị a ka arụnyere na sistemụ gị iji bido rụọ ọrụ gam akporo emulator nke ọma:
b) The ngwugwu kwekọrọ na Google Play Store ma ọ bụ ihe ọ bụla meta-ngwugwu nke ngwa Google maka gam akporo Version dị. Ihe Nlereanya: google-play-5-12-9-en-android.apk ó pa_gapps-modular-pico-5.1-20150315-signed.zip
Mgbe nke a gasịrị, ị nwere ike iwunye ihe niile ịchọrọ ma ọ bụ hazie ngwaọrụ gị ka achọrọ.
Lee ụfọdụ onyonyo igosi gị ike nke Mgbagha:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » android » Genymotion: Ihe emulator Android maka GNU / Linux
You na-eji KDE4 na onyonyo ahụ?
Eeh. M na-eji KDE 4 na DEBIAN 8 ruo ụnyaahụ, etinyela m KDE 5 na DEBIAN 9.
Na-akpali nnọọ mmasị, nwalee android egwuregwu na Linux dị ka 888poker. Echekwara n'akpa m. Nnukwu onyinye Ing. Jose Albert, dị ka mgbe niile
nke g dijo
BLOG A B THE NET NA Gị INGINEER B THE LAWYYYYYY !!!!!
... nke ahụ dị mma, abụ m onye ofufe, kedu ihe ọ bụ
Zaghachi toño g
Ebube ngwa, ọ na-anọgide na njedebe iji gosipụta ngwugwu Genymotion-ARM-Translation_v1.1.zip na Gapp (nke nwere ọtụtụ ụdị dị iche iche ka ị họrọ nke kwesịrị ekwesị maka ngwaọrụ gam akporo gị), ozugbo ibudata ha:
Iji wụnye nke ọ bụla, mepee mebere gam akporo ngwaọrụ na ịdọrọ na dobe faịlụ, mgbe ahụ arụnyere na gbanyụọ mebere ngwaọrụ ma gbanye ya ọzọ, na otu ugboro maka faịlụ ọ bụla.
Na mgbakwunye, ị ga-enwerịrị akaụntụ email ka ọ rụọ ọrụ nke ọma.
N'agbanyeghị nke ahụ, ọ ga-abụrịrị na m mejọrọ ihe n'ihi na m nwetara njehie na Google + ma ọ bụ ihe dị ka nke ahụ, m ga-ahụ.
Ezigbo nkwado Guillermo na mbipụta ahụ!
Ezi ngwa, Otú ọ dị, enwere m nkụda mmụọ site na nsogbu ahụ (nke na-enweghị isi) na m ga-arụ ọrụ na ntanetị site na Virtualbox, ebe ọ malitere mgbe ụfọdụ (dị ole na ole), na oge ndị ọzọ (ọnụ ọgụgụ ka ukwuu) na njedebe nke ekwentị. ..
Na njedebe m choro maka nyocha na QEMU nke android SDK nyere ...
IHE ND SOL D SOL Iche Iche:
Ngwọta nke nsogbu nke dee na Spanish:
: Mgbanwe +,
: Mgbanwe +.
Tildes: pịa otu see okwu na-esote 0 na ụdaume.
na umlaut na onu ahia abuo (nnofe + 2) na u.
N'ezie, echefula ihe ole na ole: na mmechi genymotion niile, mepee VirtualBox ma hazie igwe emere na genymotion (ọ bụghị site na ebe a, mana anyị nwere ike ịhazi):
gbanye clipboard-bi-directional: General - Advanced tab - Clipboard sharing: Bi-directional.
Dọrọ na dobe: Etinyela m Bidirectional, faịlụ ndị m na-adọkpụrụ site na Linux gaa na ngwaọrụ nke ọma tinyere ha na ndekọ ndekọ Download (folda), mana ụzọ ọzọ enweghị m aga nke ọma.
Nabata ma mechie VirtualBox.
Ka idetuo faịlụ site na kwalite asụsụ ọma na ekwentị mkpanaaka na Linux:
Bido kwalite asụsụ ọma na ngwaọrụ site na Genymotion ma wụnye ngwa "Olive Tree" Ssh Server, bido ya ma lelee IP na ọdụ ụgbọ mmiri ọ na-arụ ọrụ, echere m na ọ bụ mgbe niile (n'ọnọdụ m) IP 10.0.3.15 na ọdụ ụgbọ mmiri 2222, onye ọrụ ọ bụ ssh na paswọọdụ bụkwa ssh.
Na VirtualBox - Hazie, na menu Ntanetị, Nkwụnye 2 taabụ, pịa Advanced, pịa bọtịnụ Port Porting, gbakwunye iwu na akara ngosi akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ +: Iwu 1, TCP Protocol, Host IP 127.0.0.1, Port Host 2222, Ọbịa IP 10.0.3.15, Ọbịa Port 2222.
Malite GenyMotion na ngwaọrụ ahụ, ugbu a site na njedebe na Linux ị nwere ike idetuo faịlụ ọ bụla ma ọ bụ ndekọ na iwu ahụ:
scp -P 2222 -C -r ssh@127.0.0.1: / nchekwa / emulated / 0 / NT PKWU ORLỌ / MGBE AH D
ma ọ bụ ụzọ ọzọ gburugburu:
scp -P 2222 -C -r isi ụzọ / ASIGIN ssh@127.0.0.1: / nchekwa / emolitere / 0 / MGBE MGBE
Ugbu a, ee. Ọrụ na-esote: mụta Esperanto n'ụzọ zuru ezu, ka anyị hụ ma ụzọ Duolingo maka ndị Spain apụ, atụ anya na June / July.
Ihe nnọchianya ndị ọzọ:
Iji nweta ; pịa na
Iji nweta: pịa>
Iji nweta ¿pịa +
Iji nweta ? pịa _
Iji nweta (pịa *
Iji nweta) pịa (
Inweta - pịa /
Iji nweta = pịa na)
Iji nweta / pịa &
Iji nweta _ pịa na?
Enwerem nsogbu dijo
Ọ bụ na enweghị m ike ịgba ọsọ site na njikwa ahụ, ọ na-ezitere m ihe a:
./genymotion: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6: mbipute CXXABI_1.3.8' not found (required by /opt/genymobile/genymotion/libQt5Core.so.5)
./genymotion: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6: versionGLIBCXX_3.4.20 ′ ahụghị (chọrọ site /opt/genymobile/genymotion/libQt5WebKit.so.5)
./genymotion: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6: mbipute CXXABI_1.3.8' not found (required by /opt/genymobile/genymotion/libicui18n.so.52)
./genymotion: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6: versionCXXABI_1.3.8 ′ chọtaghị (achọrọ site /opt/genymobile/genymotion/libicuuc.so.52)
./genymotion: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6: nsụgharị `` GLIBCXX_3.4.20 ′ adịghị achọta (chọrọ site /opt/genymobile/genymotion/libQt5Qml.so.5)
Job 1, './genymotion&' agwụla
Ebudatara m ụdị ahụ maka Ubuntu 15.04, n'ihi na ahụbeghị m nke gara aga, agbanyeghị, enwere m elementaryb os freya 0.3.2 dabere na Ubuntu 14.04, ọ bụ ya?
Zaghachi na enwerem nsogbu
Echere m na gị libstdc ++. Ya mere, ọbá akwụkwọ adịghị ka ọ dị ugbu a dị ka achọrọ. Melite ebe nchekwa gị ma ọ bụ ụdị nke elementrị.
Lee anya na ntinye a:
Agụghị m ya niile, ikekwe ọ zarala ya. Kedu otu ị ga - esi dozie esemokwu nke imetụ ihu?
Na Linux Mint 18 etinyewo m Genymotion 2.8.1 64 ibe n'ibe. Ihe niile gara nke ọma. Enwere m ike ịgbakwunye ngwaọrụ, ịnwale ihe dị iche iche 3, mana n'oge "ịgbanye" ngwaọrụ ahụ, ihe ọ bụla ọ bụ, sistemu ahụ kwụgidere na gam akporo "nnabata ihuenyo" ma ọ nweghị ihe na-arụ ọrụ (ọ bụ ezie na m nwere ike ịmegharị pointer òké na ihuenyo) na kọmputa ga-tọgharịa. Ihe ọ bụla na-egosi ihe nwere ike ịgahie? Daalụ.
Zaghachi Francisco Javier
Enweela m ngwungwu genymotion-2.8.1_x64.bin mana ọ bụghị mgbe m gbalịrị ime ya, ọ naghị amalite mmemme ahụ, tinye folda / opt / genymobile / genymotion na m gburu faịlụ genymotion mana m nwetara njehie a / lib64 /libX11.so.6: akara a na - akọwaghị: xcb_poll_for_reply64. Eji m fedora 25. Aga m ekele enyemaka gị.
mmụọ ozi dijo
Ọfọn, enwere m ike ịwụnye genymotion nke ọma mana mgbe m mepere ya ọ nweghị ihe ọ bụla, n'ihi gịnị kpatara ọ ga - eji bụrụ na ọ naghị aza?
Mgbe ịmalite ya jụrụ ikikere ebe m ga-ahụ otu?
Zaghachi na nri
Anaghị m echeta na dị ka ọ dị n’isiokwu ahụ, rịọ maka inweta ma ọ bụ nnabata nke ikikere! Ma eleghị anya, ọ ga-aka mma ịme ihe ederede na ngwa iji hụ ihe dị ọhụrụ na ya na Linux ma ọ bụrụ na ọ na-arịọ maka ikikere ugbu a!
Red Hat na-enye ndenye aha n'efu maka ndị mmepe